737 Max Auto Brakes
737 Max Auto Brakes 1 ọnwa 4 izu gara aga #1809
Nnukwu ọrụ na 737 max, hụrụ ya n'anya. Otu okwu, mmadụ enwere ike ịnyere aka, autobrakes agaghị ahapụ mgbe ọ bụla ọ rutere ruo mgbe ụgbọ elu ahụ bịara na njedebe zuru oke n'okporo ụzọ awara awara ??? Can nwere ike pịa. ma ọ bụ itinye breeki na ọystụ gị, mana ha agaghị ahapụ ruo mgbe ọ kwụsịrị. Enwere ndozi maka ihe a funahụrụ m ebe? Adị m mma na ndezi faịlụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ndozi? Biko nyere aka, daalụ tupu !!!
Ndumodu ikpe azu: site Julip.
737 Max Auto Brakes 1 ọnwa 4 izu gara aga #1810
Ngwọta m abụghị ịtọ ha tupu ha abanye. Otu nsogbu. Ma ka m na-eji ya, ma eleghị anya, anwalela ihe niile na ihe niile iji mee ka ike gwụ ha ma ha rutere ma ka ha bụrụ otu.
EDIT: anyone nwere onye nwere nsogbu maka nsogbu ebe ụgbọ elu na-ebugharị na 80 kts?
Oge ike page: 0.246 sekọnd